मुलुक नेता र कर्मचारी, राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको भीषण द्वन्द्वको चपेटामा
नेपालका समस्या कति छन् कति ! तर अहिले यो मुलुक हाईब्लड प्रेसर र हाई सुगरको रोगले रन्थनिदै गएको छ । त्यो हो- कर्मचारी र नेताहरूबिच घमासान द्वन्द्व ।
यो रोगमा फँसेपछि डाक्टरहरू उपचार वा निदान गर्न निरीह हुन पुग्छन् । जनता बिचरा बाच्छा साढहरूको जुधाईको मिचाईमा पर्छन् । यस्तोमा हार राजनीति र नेताहरूकै हुन्छ, चेतना जागोस् !
जति सहज, सरल, सुनिश्चित, न्यायपूर्ण निजामती प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यति त्यो अनुशासित र कर्तब्य परायण हुन थाल्छ । जति निजामति प्रणालीभित्र निष्पक्षता, न्यायको बोध हुन्छ त्यति त्यो स्वस्थ हुन्छ । नेपालका नेताहरूलाई कर्मचारीतन्त्र बारेमा बुटिबांङ केही थाहा हुदैन तर उपबुज्रुक बनेर यसलाई केके न नयाँ गरें भन्ठान्दै गिजोल्न मात्र खोजिरहेका छन् । अन्तत ः गिजोलिएको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक ब्यवस्था र नेताहरूको नै बिजोग हुने हो। कर्मचारीहरू नेता हैनन्, तीनले जनतासंग भोट मागेर यो गर्छु, उ गर्छु भनेर आएका हैनन्, बुद्धि र परिश्रम दिएर पारिश्रमिक लिने हुन् । तिनबाट लिने कति स्मार्ट छ त्यसको फल त्यसमा भरपर्छ । कानुनको छडिले काम गर्ने भएको भए विश्वमा सबैभन्दा धेरै नौ सिंग भएको कानुन बनाउने देश मध्येको नेपाल पनि हुदै हो ।
कर्मचारीतन्त्रलाई नेताहरू आफैले विगत ३ दशकसम्म अत्यधिक राजनीतिकरण गरेर गिजोल्दा गिजोल्दा पतीत र निकम्मा बनाईसकेका हुन ्। यसरी ध्वस्त पारेर अब त्यो संस्थाबाट नेताहरूले काम लिन नसक्दा र नटेर्दा, भएको स्थीर इकोसिस्टम भत्काएर असक्त भएपछि अहिले नानाथरिका सड्केका मगजका उपज, चाहिने नचाहिने विकल्पहरू राखेर बिजातीय नयाँ निजामति सेवा ऐन बनाउनमा घूँडा धसेर लागेको देखिन्छन् बबुरा सांसदहरू । तर, म ठोकुवा गर्छु, जुन कथित नया‘ बिकल्पतिर ती लागेका छन् त्यसले मुलुकको प्रशासनिक ब्यवस्था र वातावरण आर्यघाटमा पुर्याई छाड्न, अब १ दशक पनि लाग्ने छैन कुरौं । केही थोरै सहज, सरल, सजिलो, पारदर्शी, निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र हँुदा हुदै मनपरिको कथित नयाँ ब्यवस्थातिर सोच्नु आत्महत्या गरे सरह हुनेछ । कर्मचारीतन्त्र गिजोल्नु राजनीतिक ब्यवस्थाको हर्टअट्याक हुनु जस्तो हो ।
निजामति सेवा प्रभावकारी कसरी बनाउने ? कसरी ब्यावसायिक र राजनीतिमुक्त बनाउने ? कसरी सक्षम र विश्वस्तरीय बनाउने ? के गर्दा यो सेवा बिज्ञानअनुकूल प्रविधिले लैस हुन्छ ? के गरी जनजवाफदेही गराउने ? के गरी नेताहरूको दासत्वबाट यसलाई मुक्त गराउने ? के गरी सम्मानजनक बनाउने ? के गरी आत्मबिश्वासले भरिपूर्ण बनाउने ? के कस्तो सुबिधा दिएर उत्प्रेरित गराउने ? के कस्तो सुबिधा र अधिकार दिने ? के कसरी न्यायपूर्ण परिचालन र वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्ने ? कसरी सेवामा टेलेन्ट आकर्षित गरेर टिकाउने गरी परिचालन गर्ने ? नेताहरूलाई यस्ता कुरामा बाल मतलब छैन, न तिनका पढाई स्स्कर अनुभव र शिक्षादीक्षाले बसको कुरा हो ।
भएको कर्मचारी प्रणालीलाई कसरी लथालिङ्ग र निरूत्साहित पार्ने ? कसरी यसको मानमर्दन गर्ने ? कसरी हेप्ने र दास बनाउने ? तिनका सुबिधा वा हिजोका अवसर सुबिधा कसरी अपहरण गर्ने ? कसरी सक्षम जनशक्तिलाई नेपालबाट खेद्ने ? कसरी बिभिन्न बहानामा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक चम्चाहरू हुल्ने ? यस्तै मगजमा खेलाइरहने मतिभ्रष्ट नेताहरूको युग बन्यो अहिलेको नेपाल । नेपालको ईतिहासमा अहिले जस्तो कबाडी नेताहरूको युग मैले आजसम्म कहिले अनुभव गरिन । मुलुकलाई धुजाधुजा नपारेसम्म यिनको अन्तिम सास नजाला जस्तो देखिदै छ।
अब सचिव, डिजी, सहसचिव , प्रोजेक्ट म्यानेजर जस्ता पदहरूमा पनि सीधै राजनीतिक कार्यकर्तालाई दलले नियु्क्ति दिने र प्रशासन चलाउने गरे हुन्छ, ताकि बेकारमा कर्मचारीले दोष खेप्न नपरोस् । त्यसै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुलेर सबै राज्य यन्त्रलाई क्षतबिक्षत पारिसकेकै छन् । बिकृतिमा महारथ हासिल भैसकेको वर्तमानस्थितिमा जाबो १०५ मात्र सीट रहने खुला उपसचिव र सहसचिव पदमा बहालवाला कर्मचारीलाई भाग लिनबाट बन्चित मात्र हैन कि त्यस्तो हेप्ने खालको वाक्य राखेर इतिहासमै अहिलेको राजनीति कलंकित हुन खोज्ने नेताहरूको कुनियतमाथि के को बेकारमा बहस गर्नु ।
पूरा मुलुकमा भयानक अनियन्त्रित मूर्खताको पहिरो गईरहेको छ, जाबो खुलाबाट छड्के प्रवेशमा बहालवाला निजामति कर्मचारीलाई रोक लगाउने बकमफुसे नियतधारीहरूको विषयमा के को गनगन गर्नु त नि! बेकार समयको नाश !
मर्नैपरे खुट्टा तानेरै मर्नु भन्ने बूढापाकाको कथन छ ! माईल्ड हर्टअट्याक सुरू भएकै छ, आईसियूको पर्खाईमा सिभेयर अट्याक छ ।
उपाध्याय, नेपाली सरकारका पूर्वसचिव हुन्